“Oromiyaan suuraaf baay’ee mijattuu taatullee agarsiisa suuraan.. – Kichuu
HomePhoto Gallery“Oromiyaan suuraaf baay’ee mijattuu taatullee agarsiisa suuraan..
“Oromiyaan suuraaf baay’ee mijattuu taatullee agarsiisa suuraan..
“Oromiyaan suuraaf baay’ee mijattuu taatullee agarsiisa suuraan duubatti hafneerra”
(bbcafaaoromoo) –Agarsiisni suuraa yeroo jalqabaaf haala teessuma lafaafi qabeenya tuurizimii akkasumas aadaa naannoon Oromiyaa qabdu irratti xiyyeefate giddugala aadaa Oromootti ilaalamaa jira. Agarsiisni ogeessa suuraafi daayreektara viidiyoo sirbaa Amansiisaa Ifaatiin qophaa’ee kun hanga Fulbaana 20, 2010 ALI yookiin jala bultii ayyaana Irreechaatti itti fufa. “Oromiyaan suuraaf baay’ee mijattuu taatullee agarsiisa suuraan duubatti hafneerra.” jechuun ogeessi suuraa kun BBCtti himeera. Filannoo isaatin suuraawwan agarsiisaaf dhiyaatan keessaa kanneen isinii dhiheessineerra.
Dargaggeessa naannawa Finfinnee kun, qamadii haamuun bissii bissiin hidhaa jira
Hawaasni naannawa Finfinnee jiraatu, har’as jireenyisaanii qonnarratti kan hundaa’edha. Dargaggeessi naannawa Finfinnee kun, qamadii haamuun bissii bissiin hidhaa jira.
Birraan yogguu bari’u Oromoon hundi bakka jiranirraa walitti qabamuun, Waaqasaanii galateeffatu. Haawwan akkasitti faayamanii bareedan kunniin Godina Arsii irraa kabaja ayyaana Irreechaa bara 2009’if gara Hora Harsadiitti gareen dhufan.
Suuraan kun haala jiruufi jireenya baadiyyaa agarsiisa. Godina Gujii Aanaa Liibanitti ka’e.
Hawaasa Booranaaf re’een iddoo guddoo qabdi. Yeroo bonaafi bishaan hinjirretti, re’een waanuma salphaan dandamachuu dandeessi. Suuraan kun godina Boorana Aanaa Yaaballootti ka’e. Re’ee fi boca mukaa re’ee yookin gadamsa fakkaatu.
Akkuma gosa Oromoo kaanii Karrayyuunis gadaa qaba – bokkuu jedhama. Sirni walharkaa fuudhuu Bokkuus, bara darbe keessa naannoo Fantaallee irraa gara iddoo jilaa, Tarree Luugootti godaanuun taasifameera.
Mootiin Abbaa Jifaar bara 1878 – 1932tti Jimmaafi naannawa ishee bulchaniiru. Masaraan isaanii kunis naannawa Magaalaa Jimmaa iddoo olka’aa Jireen jedhamutti argama.
#AddisAbeba hosting the 1st of its kind photo exhibition centered around the life of the #Oromo people in #Ethiopia https://t.co/bL6vk9fT81 pic.twitter.com/itg5ULmOr6
— Addis Standard (@addisstandard) September 26, 2017
Moving Beyond the Trauma of October 2, 2016 Irreecha Massacre, Part II
World Bank: What Studies in Spatial Development Show in Ethiopia-Part I